iKey 2.5 ekhutshwe ngoku isebenza nge KeyCue ekuHlahiseni Zonke iiNdlela eziMfutshane | Plum emangalisayo
Disemba 12, 2010
Umbhali: umgulisi kaJulian
IKey 2.5 ekhutshwe ngoku isebenza nge KeyCue ekuHlahiseni Zonke iiNdlela ezimfutshane
UMHLA: Disemba 12, 2010
IPlum emangalisayo namhlanje ibhengeza i-iKey ngoku isebenza ngokubambisana ne-KeyCue ukubonisa iindlela ezimfutshane kunye neelektroker. iKey yeyona ndlela ilungileyo yokuphinda isenzo sokuphindaphinda kwi-Mac. I-KeyCue yeyona ndlela ibalaseleyo yokubonisa zonke ii-hotkeys kwi-Mac.
IKey Inguqulelo yesi-2.5 yoLwazi, UkuThenga kunye nokukhuphela: //plumamazing.com/mac/ike
IPlum emangalisayo namhlanje ibhengeza i-iKey ngoku isebenza ngokubambisana ne-KeyCue ukubonisa iindlela ezimfutshane kunye neelektroker
Isishwankathelo kunye ne-AutomationiKey sisixhobo esizisebenzelayo, inkqubo eyenza iindlela ezimfutshane zokufezekisa imisebenzi ephindaphindwayo. Eyona nto ibalulekileyo, indlela emfutshane ye-iKey yinkqubo encinci ngokwayo, kodwa awudingi kwazi into yokuqala malunga nenkqubo yokwenza indlela emfutshane ye-iKey. Into ekufuneka uyenzile kukudibanisa izinto ezintathu ezifunekayo zendlela emfutshane: Umyalelo omnye okanye engaphezulu enika indlela emfutshane ukusebenza kwayo, imeko ebaleka kuyo, kunye nesiqalisi esichaza ukuba indlela emfutshane yenziwe njani.
“Kwi-Mac bekusoloko kukho imfihlakalo yokuba zeziphi ii-hotkeys ezisetyenziswayo kwaye zisetyenziselwa yiphi injongo. I-KeyCue isombulula le mfihlakalo ngendlela entle kakhulu, ngokubonisa zonke ii-hotkeys ezikhoyo kwindawo enye. I-iKey sisoftware yokwenza isenzo esiphindaphindayo okanye uthotho lwezenzo, ezibizwa ngokuba yindlela emfutshane, kwaye siyabela i-hotkey ngokudibeneyo ukudityaniswa kweKeyCue kunye neKey kunika abasebenzisi beMac amandla kwimveliso. Abanini be-iKey bafumana indlela yokubona zonke iindlela zabo ezinqumlayo kwindawo enye xa besebenzisa i-KeyCue. Ngokudibeneyo, uKeyCue kunye neKey, liqela elikhulu. ”UJulian Miller, u-CEO, uPlum Amazing
Ngokudibeneyo iKey kunye neKeyCue zibonelela ngamandla amakhulu, ulawulo kunye noomatshini kuyo nayiphi na inkqubo ye-Mac OS X kubandakanya i-Apple's Final Cut Pro, iTunes, Garage Band kunye ne-Aperture, kunye neAdobe's PhotoShop, Illustrator, InDesign, Flash, ColdFusion kunye neLightRoom.
Nge KeyCue, bekusoloko kunokwenzeka ukubonisa kunye nokuphonononga iindlela ezimfutshane ezikhoyo kwi-Mac yakho. NgeKey, unokuzenzekelayo amanyathelo aphindaphindiweyo ngokwenza iindlela ezimfutshane. Kwaye ngoku, ngokuqala nge-KeyCue 5.2 kunye ne-iKey 2.5, KeyCue ingabonisa iindlela zakho ezimfutshane, "utshilo uGünther Blaschek, CTO we-Ergonis Software.
Nabani na unokuxhamla kule duo yesoftware. Baluncedo ngakumbi kubaqulunqi, abahleli, iimvumi, iipodcasters, ababhali, abaqulunqi beenkqubo, izazinzulu, abaphandi, ootitshala kunye nabafundi.
Oku kulula ukuyisebenzisa izixhobo ezinkulu / ezenzekelayo zonga ixesha, ukuthayipha, kunye namakhulu okuchofoza mihla le. Kuphephe umjelo we-carpal, yenza ngakumbi kwaye wonwabe nge-iKey.
Incwadi ebalaseleyo ebhalwe nguAdam Engst nayo iyabandakanywa.
I-iKey yenza kube lula ukwazisa usetyenziso, uhlobo lokubhaliweyo, iifolda ezivulekileyo, faka imihla, yenza imisebenzi yenkqubo, yenza iintshukumo kumfumani, hambisa iifestile, iiseva zokuxhoma, iincoko zomyalelo, sebenzisa ibhodi eqhotyoshwayo nokunye okuninzi. Hlanganisa la manyathelo ngokulandelelana anokwenza nantoni na kuso nasiphi na isicelo okanye uMfumani, emva koko uwaqalise ngezitshixo ze-X, indibaniselwano ye-hotkey, into yemenyu, isibeki-xesha, okanye iqhosha kwipaneli.
Yenza kancinci kwaye ufeze ngakumbi nge-iKey kunye ne-KeyCue.
Abasebenzisi Rave - "Ngaphandle kwesoftware yam imihla yokuphendula imibuzo engapheliyo iya kubangumbono ongazenzisiyo - Enkosi ngokundikhulula kwimisebenzi ephindaphindwayo" = UBrent Hohlweg, uMlawuli wabahlali, iStrata Corporation
Uphengululo-Mac-Guild.org inika iKey 4.5 ngaphandle kweempuku ezi-5 “Oko ndaqala ukusebenzisa iKey, le gem indigcinele iyure ngeveki isebenzisa iindlela ezimfutshane. Ngokubanzi, ndifumene iKey inokuthenjwa kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kulabo bafuna isisombululo esinexabiso lokudala iindlela ezimfutshane kwiMac OS X, ndincoma kakhulu ukuba ujonge iKey. ”-UJames Richvalsky
Izinto ezifunekayo: * Mac 10.5 okanye ngaphezulu
I-Plum emangalisayohttps: //plumamazing.com
IKey Inguqulelo 2.5 Ulwazi lwenguqulelo, Ukuthengwa kunye nokukhuphela
IPlum emangalisayo (eyayisakuba yiSoftware) yinkampani yabucala ebekelwe bucala i-iPhone / i-iPad, iMac, iiWindows kunye nezicelo zeselula. IPlum emangalisayo ngumnikezeli wehlabathi jikelele wezicelo zeselfowuni kunye needesktop ukusukela ngo-1995. I-Plum emangalisayo iyenza kwaye ithengise eyayo isoftware kodwa ikwasebenza umsebenzi wophuhliso (inkqubo) kwezinye iinkampani kunye nabaxumi. Sinomnqweno wokudala iimveliso ezintle. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ukuba unemibuzo, kufuneka i-app eyenzelwe okanye ufuna ukusebenzisana nathi. Ngolwazi olongezelelweyo, nceda undwendwele iPlamu emangalisayo. Ilungelo lokushicilela (C) ngo-2010 liyamangalisa. Onke Amalungelo Agciniwe. I-Apple, uphawu lwe-Apple, i-iPhone, i-iPod kunye ne-iPad ziimpawu ezibhalisiweyo ze-Apple Inc. e-US kunye / okanye nakwamanye amazwe.